Kolejy asiana "Centre médiathèque" - Collège Paul Minault
Hananganana ivon-toerana fitehirizana sy fampitam-baovao manaraka ny teknolojia maoderina na « Centre médiathèque » ny eo anivon’ny kolejy protestanta Paul Minault eny Androhibe. Izany no nivoitra nandritry ny fampahafantarana ny fankalazana ny jobily faha-110 taona niorenan’ity sekoly ity omaly. Izany no hatao dia mba hampitomboan’ireo mpianatra ny fahalalany amin’ny alalan’ny fikarohana sy ny fandalinana manaraka ny teknolojia maoderina.
«Trano fikarohana ara-teny, video miompana amin’ny fampianarana, fikarohana ara-kajimirindra na informatika, ary raki-tantara sy raki- kevitra ara-niomerika no mitambatra ho hita ao amin’io ivon-toerana vao hatsangana io », hoy ny fanamarihana nataon-dRakoto Andriana mbinintsoamanitriniaina, talen’ny kolejy.
Miisa 520 ny isan’ireo mpianatra manovo fahalalana eo anivon’izany sekoly izany ary 30 kosa ireo mpampianatra misahana ny fanabeazana azy ireo. Ankoatr’izay dia 2 ny isan’ny kilasy mandry ho an’ny zazalahy sy ny zazavavy ao amin’i Paul Minault. Ireo ankizy avy any amin’ny faritra avaratry ny nosy moa no tena maro sy mangataka hiditra hianatra ho kilasy mandry ao.
Amin’ny 22 janoary izao no hosokafana amin’ny fomba ofisialy eny amin’ny FLM eny Ambatovinaky ny fankalazana izany jobily izany. Hisy hetsika ataon’ireo herivelon’ny sekoly izay ifandribonan’ny mpianatra, ny ray aman-dreny, ny maintimolaly ary ny mpandraharaha sy mpampianatra mandritry ny fotoam-pankalazana.
PrécédentKolejy Protestanta PAUL MINAULT : Mitohy ny fankalazana ny faha-110 taona